Ady amin’ny coronavirus Misy sekoly efa mandray fepetra
Na dia mbola tsy tonga eto amintsika aza ilay areti-mandoza Coronavirus dia marobe sahady ireo sekoly efa mandray fepetra mifandraika amin’izany ho fiarovana ny mpianany sy ny mpiara-belona rehetra.
Ho an’ny lisea tsy miankina La Prime etsy Anosibe ohatra dia nohamafisina ny fanasan-tanana amin’ny savony, raha araka ny fanazavan-dRtoa Razanamihaja Clarisse. Mividy savony marobe isan’andro ny sekoly raha araka ny zavatra hita teny an-toerana ka raha tamin’ny paompy mivantana no nanasan’ny mpianatra tanana teo aloha dia nozaraina amin’ny sceau be dia be izany amin’izao mba tsy hisian’ny filaharam-be. Ankoatra izay dia nampianarina ny mpianatra ihany koa ny tsy hikitika ny faritry ny loha toy ny orona, ny maso ary ny vava indrindra ny fandraisan- tanana olona na koa mifampikasoka amin’ireo hita fa manavy be na mikohoka. Tsy mijanona hatreo izany fa mandefa ireo mpianatra marary mody hita fa tena tsy salama ihany koa ny sekoly ankoatra ny fampitana amin’izy ireo ny hafatra amin’ny fanabeazana ny ankohonany sy ireo mpiara-monina aminy.